Tani waa sida ficil ee qalabka GIS loogu yeero si looga takhaluso iswaafaq la'aanta vector-ka ee caadooyinka guud ee la aqbalo ee muuqaalka guud. Qalab kasta wuxuu ku hirgaliyay qaabkiisa, aan eegno kiiska Bentley Map iyo Manifold GIS. Microstation Geographics Microstation waxaa ku jira laba qalab oo isku mid ah, midna waxaa hawlgaliyay ...
Had iyo jeer waxaa jira wax aysan aaladaha shirkadaha waaweyni si fiican u qabanayn, tan waxay uga faa'iideystaan ​​kuwa yar yar si ay u horumariyaan xalal daboolaya baahida macaamiisha, guud ahaan way ahaayeen. Haddii ay tahay ganacsi wanaagsan ama aan ahayn, qaabku waa mid xiiso leh, waxay u muuqdaan inay aadaan shirarka sanadlaha ah si kor loogu qaado wax soo saarkooda ama adeegyadooda; xusuusta…
tabo cusub, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, egeomates My
Waqti ka hor waxaan kuu sheegayaa in Manifold uu ku xirmi karo Google, Yahoo iyo Virtual Earth. Hadda isku xiraha isku xirka Khariidadaha Furan (OSM) ayaa soo baxay, kaas oo ay jidka ku soo saareen C # oo ah isticmaale isticmaale la yiraahdo Jkelly. Warku wuxuu toddobaadkan ka soo muuqday madasha Manifold, halkaas oo ...
Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, dalwaddii Earth